मौनीको सुन्दरतामा कस्मेटिक कमाल ! | Screennepal
मौनीको सुन्दरतामा कस्मेटिक कमाल !
Nov 27, 2016screennepalfeature, Sliver screen0
काठमाडौं, १२ मंसिर । भारतीय टिभी इन्डस्ट्रीकी चर्चित अभिनेत्री मौनी रायको सुन्दरता देखेर नलोभिने सायदै होलान् । उनी सुन्दरताकै कारण टेलिभिजन दर्शकमाझ सधै चर्चामा हुन्छिन् । टिभी सीरियल ‘नागिन’की यी चर्चित मौनी टिभी इन्डस्ट्रीकी टप अभिनेत्रीमा पर्छिन् । भनिन्छ, यहाँसम्म आइपुग्न उनलाई आफ्नो सुन्दरताले हैसे गरेको छ । तर, भन्नेले जे भने पनि मौनीले आफ्नो सुन्दरताका लागि मिहिनेत पनि गरेकी छन् ।
मौनीको पुराना र नयाँ अवतारमा आकाश–पातलको भिन्नता छ । उनी विशेषगरी दुईवटा लुक्समा देखिएकी छन् । मौनीको सुन्दरताको कमाल कस्मेटिक सर्जरीलाई पनि लिइन्छ । मौनीले जसरी आफ्नो सुन्दरताका कारण चर्चा पाइरहेकी छन्, त्यसैगरी कस्मेटिक सर्जरीले पनि चर्चा पाउने गरेको छ । उनले पछिल्लो समय आफ्नो लुक्स चेञ्ज गर्न कस्मेटिक सर्जरीको सहारा लिएको बताइन्छ ।
यिनै टेलिस्टार ‘नागिन–२’ सीरियलमा फरक लुक्समा देखिएकी छन् । र, उनी ‘महादेव’ मा अलि फरक लुक्समा देखिन् । उनले ओठ सर्जरी गर्दा साइडइफेक्ट भएको थियो । त्यो ‘नागिन’ सीरियलको लेटेस्ट सीजनमा पनि देख्न सकिन्छ । यसका अलावा उनले इन्स्टाग्राममा पनि केही आफ्ना तस्बिर शेयर गरेकी छन् ।
Previous Post... अनि ‘बधाई भन्न करै लाग्यो’ (भिडियोसहित) Next Postराष्ट्र संघ मुख्यालयमा ‘पिंक’